Jaaliyada muslimiinta Zambia oo deeq soo gaarsiiyay Dadka Dhimirka La’ & Caruurta Darbijiifta Garoowe – SBC
Jaaliyada muslimiinta Zambia oo deeq soo gaarsiiyay Dadka Dhimirka La’ & Caruurta Darbijiifta Garoowe
Posted by Webmaster on Noofember 18, 2011 Comments
Jaaliyada muslimiinta ah ee reer sambia ayaa maanta Deeq raashin ah oo isuu jirta Bur ,Bariis ,Sonkor ,Saliid ,iyo Baasto oo ay wehelinayeen agabka loo isticmaalo hurdada sida Joodariyaal iyo Maro Kaneecooyin waxa ya ugu deeqeen bulshada danyarta ah ee ku dhaqan magaalada garoowe kuwaasi oo kala ahaa xarunta lagu xanaaneeyo dadka dhimirka la’,xarunta ay ku jiraan carruurta darbi jiifka ah iyo Kuleejada ay ku jiraan caruurta agoonta ahi iyadoona ay si wayn u soo dhaweeyeen mas’uuliyiintii gacanta ku hayay goobahaasi.
Ugu horrayntiiba waxaa la guddoonsiiyay qalabkaasi ururka gacanta ku haya dadka dhimirka la ee lagu magcaabo nasrulaahi iyadoona ay ka guddoontay guddoomiyaha ururkaasi xaawo qaylo wayne oo Sheegtay in ay aad u soo dhawaynayso deeqdaan uga timi walaalahooda muslimiinta ah ee ku dhaqan wadankaasi Zambia loona baahanyahay in soomaalidu meel kasta oo ay joogto ay u gargaaraan Dadkaani dhimirka la’a.
Waa kan Maxamed Cabdi Horreeye oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii wakiilka ka ahayd jaaliyada muslimiinta ee wadankaasi Zambia oo ka hadlaya deeqdaani ay maanta qaybinayaan iyo inta meelood ee ay soo mareen isagoona xusay in ay horay cunta qaybin uga soo sameeyeen gobalada koonfureed ee wadanak soomaaliya haatana ay marayaan gabagabadii ayna u sii gudbi doonaan deegaanda kale ee Puntland.
Goobihii deeqdaasi lagaarsiiyay waxaa ka mid ahaa kuleejka ay ku jiraan carruurta agoonta ah eek u taala duleedka galbeed ee magaalda garoowe maamulaha kuleejkaasi Abshir Macalin Ibraahim ayaa u Mahad celiayay jaaliyadaasi isagoona sheegay in ay ku dayasho maudantahay loona baahanyahay in lataageero dadkaani agoonta ahi oo aysan jirin cid si khaas ah u taageerta marka laga yimaado Teegeerada dadka muslimiinta ah.
Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowlada hoose ee dagmada garoowe c/rashiid ciise awyaale oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii goobjooga ka ahayd deeq qaybintaasi ayaa isna kahadlay arragtidooda ku Aadan arrintaani sheegayna ianay iyagu intii karaankooda ah gacan ka gaysan doonaan sidii dadkaani loo daryeeli lahaaa.
C/salaam Maxamuud Macalin waa xubin ka mid ah jaaliyada reer Zambia waxaana uu ka waramayaa goobaha ay xooga saareen dagmada garoowe isagoo sheegay in ay mudnaanta koowaad siiyeen Goobaha ay ku suganyihiin dadka danyarta ahi sida goobaha maanta oo kale ayna cuntadaanka qaybiyeen gudaha magaalda Garoowe ilaa afar goobood.
Muddooyinkii ugu danbaysay waxaa soconaysay dadaalo xoogan oo lau taageerayo dadka danyarta ah eek u dhaqan deegaanda Puntland iyagoona ay taageero kala duwan gaarsiinayeen urarada sama falka Ah ee ka howl gala Puntland ;iyadoona jaaliyada muslimiinta ah ee reer Zambia ay horay deeqo noocaan oo kale ah uga soo qaybisay gobalada koonfureed ee ay ku dhufatay abaarta baahsani..